Ny Trano Fiompiana
Alakamisy 20 Mey 2021
Ny Trano Fiompiana Ny fantsona vy misy tsipika matevina izay namboarina tamin'ny fomba somary nihena kely ny dian-tongotry ny trano raha manome ny fihenan-tanana sy ny fahamarinan-toerana ho enti-miakatra ny habakabaka ambonin'ity. Mifanaraka amin'ny fomba fijerin'ny minimalist, dia natao tao anatin'ny rafitry ny hazo efa misy izany toeram-pambolena izany mba hampihenana ny fahazoana ny hafanana anatiny. Nanampy tamin'ny fanangonan-tsindrimandry ireo lozam-pifangaroan'ny lavenona teo amin'ny tarehimarika izy io noho ny tsy fahampiana sy ny alokaloka nandroaka ilay trano. Ny fananganana ilay trano dia nanome antoka ihany koa fa tsy voasakana ny Tany ary tsy voasakana ny fomba fijery.
Alarobia 19 Mey 2021
Trano Namboarina ho an'ny fampiononana ary koa ny tsara tarehy. Ity famolavolana ity dia tena mahasarika ny saina ary mahavariana amin'ny anatiny sy ivelany. Ahitana ny hazo oak, varavarankely natao mba hitondrana masoandro be dia be, ary manimba ny maso izany. Mampientam-po amin'ny hatsarany sy ny teknika izany. Raha vao ao amin'ity trano ity ianao dia tsy hitanao akory ny fahatoniana sy ny fahatsapana ny oasis izay mandray anao. Ny tsio-drivotra sy ny manodidina manodidina ny tara-masoandro dia mahatonga ity trano ity ho toerana tokana hivelomana lavitra ny fiainana an-tanàna. Ny tranon'ny Basalt dia naorina mba hampifaliana sy handraisana olona marobe.
Ny Kianja Sy Ny Famolavolana Zaridaina
Ny Kianja Sy Ny Famolavolana Zaridaina Mampiasa ny fandaminana ara-boajanahary sy mahay mandanjalanja ny kianja, ny tokotany dia mifandray amin'ny lafiny maro samihafa, mifampitaona ary mifamadika tsara. Amin'ny alàlan'ny paikady miorim-paka amin'ny alàlan'ny paikadim-peo 4 metatra ny haavon'ny haavony ary ahitàna ny fampirantiana sy ny endrik'ilay tetik'asa, ny famoronana toerana misy ny haino aman-jery, zavakanto, miaina ary ny tokotanin'ny kianja voajanahary.
Ny Fanarenana Wharf
Alatsinainy 17 Mey 2021
Ny Fanarenana Wharf Wharf Dongmen dia milina efa an'arivony taona teo amin'ny reniranon'i Chengdu. Noho ny fihodinana farany ny "fanavaozana ny tanàna taloha" dia potika sy namboarina indray ny faritra. Ny tetik'asa dia ny haneho sary an-tantara mahatalanjona amin'ny alàlan'ny fitsabahan'ny art sy teknolojia vaovao amin'ny toerana ara-kolontsainan'ny tanàna iray izay nanjavona, ary mba hamolavola sy hamidim-bola ho an'ny fotodrafitrasa an-tanàn-dehibe efa natory hatrizay.
Trano Fandraisam-Bahiny Ilay trano fandraisam-bahiny dia misy ao Luzhou, Faritanin'i Sichuan, tanàna iray fantatra amin'ny divain'ny divay, izay ny volavola noforonina avy amin'ny lava-divay divay eo an-toerana, habaka iray izay manala faniriana mafy hitrandraka. Ny lobolobo dia ny fanamboarana ny zohy voajanahary, izay ny fifandraisana ara-maso mifandraika amin'izany dia manitatra ny foto-kevitry ny lava-bato sy ny endrika an-tanàn-dehibe eo an-toerana mankany amin'ny trano fandraisam-bahiny anatiny, noho izany dia mamorona mpandrafitra ara-kolontsaina mampiavaka azy. Manome lanja ny fahatsapan'ny mpandeha izahay rehefa mijanona ao amin'trano fandraisam-bahiny, ary manantena ihany koa fa ny fisian'ilay akora ara-nofo sy ny habakabaka noforonina dia ho hita amin'ny ambaratonga lalina kokoa.
Asabotsy 15 Mey 2021
Ny Trano Fonenana Ny habaka manontolo dia mifototra amin'ny fahatoniana. Ny loko rehetra dia hazavana, volondolo, fotsy, sns Mba hahafahana mandanjalanja ny habaka, misy loko miloko sy ny takelaka misy sasany dia mipoitra eny amin'ny habaka, toy ny mena lalina, toy ny ondana izay misy pirinty tsy manam-paharoa, toy ny firavaka vita amin'ny vy vita amin'ny soratra. . Izy ireo dia tonga loko manjelanjelatra ao amin'ny afisy, ary koa manampy ny hafanana mifanaraka amin'ny habaka.
Calendar 2014 “Farm” Ny Kalandrie Asabotsy 19 Jona
Calendar 2014 “Town” Kalandrie Zoma 18 Jona
Artificial Topography Ny Topografika Artifisialy Alakamisy 17 Jona
Ny Trano Fiompiana Trano Ny Kianja Sy Ny Famolavolana Zaridaina Ny Fanarenana Wharf Trano Fandraisam-Bahiny Ny Trano Fonenana